RASMI: DF Somalia oo lacag ”CAYR” ah u bilaabaysa dadka danyarta ah + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka RASMI: DF Somalia oo lacag ”CAYR” ah u bilaabaysa dadka danyarta ah...
RASMI: DF Somalia oo lacag ”CAYR” ah u bilaabaysa dadka danyarta ah + Sawirro
(Muqdisho) 18 Abriil 2020 – DF Somalia ayaa si rasmi ah u daah furtay barnaamij ay kaalmo dhaqaale oo u dhigma waxa ay Soomaalidu ”cayrta” u taqaanno ku siinayso qoysaska danyarta ah, kaasoo la magac baxay ”baxnaano.”
“Waxaa inoo diyaarsan Qorshaha Horumarinta Qaran ee 9-aad oo si faahfaahsan u qeexaya qorshaha aan ku wajahayno saboolnimada, cunta yarida, annagoo xoogga saareyna kor u qaadidda nolasha dadka u nugul xaaladaha deg-deg ah sida abaaraha, duufaannada, cudurrada iyo guud ahaan musiibooyinka dabiiciga ah ee ina soo food saara,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Madaxtooyada Qaranka.
Barnaamijka Baxnaano ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku xoojineyso adeegyada dadweynaha ayaa laga hirgelinayaa 21 degmo oo ku yaal dalka iyo deegaannada hoostaga degmooyinkaas, iyada oo loo qoondeeyey dadkaas danyarta ah taakuleeyn dhaqaale oo ah 4 Malyan oo doolar bishiiba.
Sidoo kale, Barnaamijkan waxaa qeyb ka ah taakuleeyn dhaqaale oo lagu xoojinayo nolasha dadka beeralayda ah ee dalaggoodii uu galaaftay Ayaxii ku habsaday qaar ka mid ah deegaannada ay ka soo go’aan dalagyada dalka dhammaadkii sanadkii tagay 2019-kii.
”Dawladdu waxa ay maalgelin dhaqaale u sameynaysaa beeralayda si kor loogu qaado wax-soosaarka dalka.” ayaa lagu yiri qoraalka, iyadoo ay tahay markii ugu horreeysey muddo dheer ee ay dowlad Soomaaliyeed lacag kaash ah oo noocan ah shacabka u qaybiso, iyadoo haddii si aan musuq iyo eex lahayn loo hirgeliyo wax wayn tari doonta dadka danyarta ah.
Previous articleHoryaalka Talyaaniga oo lasoo jeediyey in lagu dheelo 4 magaalo oo qura (Magacyada magaalooyinka & ciyaartooyda oo durba loo yeerey)
Next articleSaxaafadda Kenya oo wax ka qortay arrin murugo leh oo Muqdisho ka socota!!